Cabasho laga muujiyay caruurta lagu celiyo Malta. | Somaliska
Go'aanka dowlada Iswiidhan ay ugu celiso jaziirada Malta dadka da'da yar isugu dhiiba qaxootinimada ayaa cabasho laga muujiyay. Xisbiga cagaaran iyo xisbiga talada haya ayaa ku baaqay in loo ogolaado caruurtu in ay degenaansho ka helaan Iswiidhan. Xildhibaanka Lars Gustafsson oo ka mid ah xisbiga talada haya ayaa sheegay in caruurta loo celiyo malta ay khatar tahay. "Iswiidhan waa in ay baartaa xaaladooda, oo go'aankooda halkaan lagu gaaraa" ayuu intaas ku daray Lars Gustafsson. Balse wasiirka socdaalka Tobias Billström ayaa arintaas ka soo horjeestay oo sheegay in ay eeda leedahay Malta oo laga doonayo in ay meel saarto nolosha caruurta qaxootiga ah. Warbixin uu soo bandhigay Radio Sweden ayaa sheegtay in caruurta loo celiyo Malta aysan helin caafimaad iyo warxbarasho midna.
Go’aanka dowlada Iswiidhan ay ugu celiso jaziirada Malta dadka da’da yar isugu dhiiba qaxootinimada ayaa cabasho laga muujiyay. Xisbiga cagaaran iyo xisbiga talada haya ayaa ku baaqay in loo ogolaado caruurtu in ay degenaansho ka helaan Iswiidhan.
Xildhibaanka Lars Gustafsson oo ka mid ah xisbiga talada haya ayaa sheegay in caruurta loo celiyo malta ay khatar tahay.
“Iswiidhan waa in ay baartaa xaaladooda, oo go’aankooda halkaan lagu gaaraa” ayuu intaas ku daray Lars Gustafsson.
Balse wasiirka socdaalka Tobias Billström ayaa arintaas ka soo horjeestay oo sheegay in ay eeda leedahay Malta oo laga doonayo in ay meel saarto nolosha caruurta qaxootiga ah.
Warbixin uu soo bandhigay Radio Sweden ayaa sheegtay in caruurta loo celiyo Malta aysan helin caafimaad iyo warxbarasho midna.